LIFE IN UK (Lesson 13 - Architecture) - Myanmar Network
Posted by Myanmar Network Forum Moderator3 on June 4, 2015 at 15:15 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
Fred, his cousin David and their friend Tom arrive at the hotel in Brighton.
Fred၊ သူ၏ ညီဝမ်းကွဲ David နှင့် သူငယ်ချင်း Tom တို့ Brighton မြို့မှာရှိတဲ့ ဟိုတယ်ကို ရောက်လာပါပြီ။
ARCHITECTURE - ဗိသုကာပညာလက်ရာ
David : Here we are!
David : ကဲ - ရောက်ပြီ!
Fred : Wow! Whatabeautiful building! It’s so old!
Fred : ဝိုး အရမ်းလှတဲ့ အဆောက်အဦးပဲ။ တော်တော်လဲ ရှေးကျတယ်နော်။
Receptionist: Welcome to The Brighton Pier Hotel. Have you gotareservation?
ဟိုတယ်ဧည့်ကြိုဝန်ထမ်း : Brighton Pier ဟိုတယ်မှ ကြိုဆိုပါတယ်။ အခန်းကြိုမှာထားပါသလား။
Fred : Yes, it’s under the name Fred Dunn.
Fred : ဟုတ်ကဲ့၊ Fred Dunn နာမည်နဲ့ မှာထားပါတယ်။
Receptionst: One twin room andasingle for two nights?
ဟိုတယ်ဧည့်ကြိုဝန်ထမ်း : နှစ်ယောက်ခန်း တစ်ခန်းနဲ့ တစ်ယောက်ခန်း တစ်ခန်းကို နှစ်ညအတွက်ပါလား?
Fred : That’s right.
Fred : ဟုတ်ပါတယ်။
Receptionist: Could you fill in this registration form for me please?
ဟိုတယ်ဧည့်ကြိုဝန်ထမ်း : ဒီဧည့်ကြိုမှတ်တမ်းကို ကျေးဇူးပြုပြီး ဖြည့်ပေးပါလား ခင်ဗျာ။
Fred : ဟုတ်ကဲ့၊ ဖြည့်ပေးပါမယ်။
Receptionist: And I need to takeacopy of your credit card.
ဟိုတယ်ဧည့်ကြိုဝန်ထမ်း : ပြီးတော့ ခင်ဗျားရဲ့ အကြွေးဝယ်ခွင့်ကဒ်ပြားကိုလည်း မိတ္တူယူထားရပါမယ်။
Tom : Here – you can use mine.
Tom : ဒီမှာ - ကျွန်တော့် ကဒ်ကို သုံးလိုက်ပါ။
Receptionist: Thank you… okay, here are your room keys. You are in rooms 506 and 507 on the fifth floor. Breakfast is served between seven and ten o’clock in the morning in the restaurant.
ဟိုတယ်ဧည့်ကြိုဝန်ထမ်း : ကျေးဇူးပါပဲ။ အိုကေ - ဟောဒီမှာ အခန်းသော့တွေပါ။ ခင်ဗျားတို့က ငါးထပ်မှာ ရှိတဲ့ အခန်း ၅၀၆ နဲ့ ၅၀၇ မှာ နေရမှာပါ။ နံနက်စာကို မနက် ၇ နာရီနဲ့ ၁၀ နာရီအတွင်းမှာ စားသောက်ဆိုင်မှာ ကျွေးပါတယ်။
Fred : Okay, thank you. Do you have room service?
Fred : ကျေးဇူးပါပဲ။ အခန်းထဲက မှာစားလို့ရတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုရော ရှိပါသလား။
Receptionist: Yes, but there isacharge for having breakfast in your room.
ဟိုတယ်ဧည့်ကြိုဝန်ထမ်း : ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နံနက်စာကို အခန်းထဲမှာ စားမယ်ဆိုရင် ထပ်ဆောင်းငွေပေးရပါတယ်။
Fred : That’s fine.
Fred : အဲဒါက ရပါတယ်။
Receptionist: If you leave your bags here, the porter will take them to your room.
ဟိုတယ်ဧည့်ကြိုဝန်ထမ်း : ခင်ဗျားတို့ အိတ်တွေကို ဒီမှာချထားခဲ့ရင် အိတ်သယ်တဲ့ ဝန်ထမ်းက အခန်းကို ယူလာပါလိမ့်မယ်။
David: Great – thank you! Oh… what time is check out?
David : ကောင်းပြီ - ကျေးဇူးပါပဲ။ အိုး - အခန်းကို ဘယ်အချိန် နောက်ဆုံးထားပြီး ပြန်အပ်ရတာပါလဲ
Receptionist: Twelve o’clock… Enjoy your stay!
ဟိုတယ်ဧည့်ကြိုဝန်ထမ်း : နေ့လယ်၁၂ နာရီပါ။ နေလို့ အဆင်ပြေပါစေဗျာ!
There isahuge variety of architecture in the United Kingdom. London is perhaps the best place to see the different styles. There are houses and buildings that are over 600 years old, historic and imposing castles and churches, modern buildings, unusual buildings and iconic sports stadiums.
The UK doesn’t haveatradition of building skyscrapers like Japan, Dubai and the USA. However, the tallest building in the UK is the tallest building in the European Union. It is called the Shard London Bridge and it is in London (completed May 2012). The Shard is 310 metres tall.
Modern architecture in the UK often borrows from many different styles popular at different times in British history. Two of the most popular styles for modern houses are from the Victorian (1837 – 1901) and Tudor (1485 – 1603) periods. Tudor houses are different because of the wooden beams you can see on the outside of the house.
Every year there isacompetition for the best new European building that was designed in Britain. It is called the Stirling Prize for Architecture. The prize is £20 000. Many different buildings are considered. In 2011, the shortlist includedanew school,atheatre, an office block andasports stadium for cycling in Britain,amuseum in Germany andacultural centre in Ireland.
Recently, some people have started building houses using new and environmentally friendly techniques. For example, some people have built houses and buildings using old tyres, bottles and straw instead of bricks. These houses are sometimes known as ‘earthships’.
• There are some buildings in the UK that are more than 2000 years ago. Many of these are in northern Scotland.
• It is difficult to get permission to buildahouse in the UK. There are very strict planning laws.
• The British Museum is the most visited building in the UK.
• ယူကေမှာ သက်တမ်း နှစ် ၂၀၀၀ ကျော်ရှိတဲ့ အဆောက်အအုံအချို့ရှိတယ်။ အများစုက Scotland မြောက်ပိုင်းမှာ ရှိကြတယ်။
• ယူကေမှာ အဆောက်အဦး ဆောက်လုပ်ခွင့်ကျဖို့ တော်တော်ခက်တယ်။ မြို့ပြစီမံကိန်း ဥပဒေများ အလွန်တင်းကျပ်ပါတယ်။
• The British Museum ဟာ ယူကေတွင် လူအများဆုံး လာရောက်လည်ပတ်လေ့ရှိတဲ့ အဆောက်အဦးဖြစ်တယ်။
reservation - ကြိုတင်မှာကြားသည်။
architecture - ဗိသုကာပညာလက်ရာ။
imposing - ခန်းနားကြီးကျယ်သည့် အသွင်အပြင်ရှိသော။
iconic - အထင်ကရ (အမှတ်အသား / အဆောက်အဦး / လူပုဂ္ဂိုလ် စသည်)။
skyscraper - မိုးမျှော်တိုက်၊ အထပ်မြင့်တိုက်။
shortlist - ပဏာမရွေးချယ်သည်။
environmentally friendly - သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်သည်။
အပေါ်မှ ဆောင်းပါးတိုကို ဖတ်၍ မေးခွန်းများကို ဖြေပါ။
Example: Where is the best place to see different styles of architecture in the UK? London
1. Are there many skyscrapers in the UK?
2. How tall is the tallest building in the UK?
3. What is different about Tudor style houses?
4. What is the name of the biggest prize for architecture in the UK?
5. What are ‘earthships’ sometimes made of?
2. 310 metres
3. There is wood on the outside of the building
4. The Stirling Prize for architecture
5. Bottles, tyres and straw
Permalink Reply by Eiei Khaing on June 5, 2015 at 19:35
Permalink Reply by yae mon on June 5, 2015 at 19:53
Permalink Reply by Lynn Let Thaw on June 7, 2015 at 9:17
Permalink Reply by thin thin myat on June 8, 2015 at 21:15
Permalink Reply by ミインチヨ on June 11, 2015 at 9:45
Permalink Reply by fawyas uddin on June 11, 2015 at 15:51
Permalink Reply by Shein Thu on June 12, 2015 at 9:28